Avatar Coin စျေး - အွန်လိုင်း AV ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Avatar Coin (AV)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Avatar Coin (AV) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Avatar Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Avatar Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Avatar Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Avatar CoinAV သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0698Avatar CoinAV သို့ ယူရိုEUR€0.0596Avatar CoinAV သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0536Avatar CoinAV သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0642Avatar CoinAV သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.632Avatar CoinAV သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.444Avatar CoinAV သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.56Avatar CoinAV သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.263Avatar CoinAV သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0932Avatar CoinAV သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0982Avatar CoinAV သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.57Avatar CoinAV သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.541Avatar CoinAV သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.376Avatar CoinAV သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹5.22Avatar CoinAV သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.11.83Avatar CoinAV သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.096Avatar CoinAV သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.107Avatar CoinAV သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿2.18Avatar CoinAV သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.486Avatar CoinAV သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥7.46Avatar CoinAV သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩82.9Avatar CoinAV သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦27.11Avatar CoinAV သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽5.14Avatar CoinAV သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.94
Avatar CoinAV သို့ BitcoinBTC0.000006 Avatar CoinAV သို့ EthereumETH0.000188 Avatar CoinAV သို့ LitecoinLTC0.00132 Avatar CoinAV သို့ DigitalCashDASH0.000816 Avatar CoinAV သို့ MoneroXMR0.00082 Avatar CoinAV သို့ NxtNXT5.68 Avatar CoinAV သို့ Ethereum ClassicETC0.0105 Avatar CoinAV သို့ DogecoinDOGE20.58 Avatar CoinAV သို့ ZCashZEC0.000894 Avatar CoinAV သို့ BitsharesBTS2.72 Avatar CoinAV သို့ DigiByteDGB2.36 Avatar CoinAV သို့ RippleXRP0.252 Avatar CoinAV သို့ BitcoinDarkBTCD0.00247 Avatar CoinAV သို့ PeerCoinPPC0.24 Avatar CoinAV သို့ CraigsCoinCRAIG32.61 Avatar CoinAV သို့ BitstakeXBS3.05 Avatar CoinAV သို့ PayCoinXPY1.25 Avatar CoinAV သို့ ProsperCoinPRC8.98 Avatar CoinAV သို့ YbCoinYBC0.00004 Avatar CoinAV သို့ DarkKushDANK22.94 Avatar CoinAV သို့ GiveCoinGIVE154.87 Avatar CoinAV သို့ KoboCoinKOBO16.3 Avatar CoinAV သို့ DarkTokenDT0.0643 Avatar CoinAV သို့ CETUS CoinCETI206.49
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 05:35:03 +0000.